ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း အင်အားအသင့်အတင့်ရှိမြေငလျှင်တစ်ခုလှုပ် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
October 20, 2009 — mmweather
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂ဝ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီ ၅၈ မိနစ် ၄၉ စက္ကန့် အချိန်တွင် ၊ ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက် ၃၂၅ မိုင်ခန့် ၊ မြိတ်မြို့ အနောက်ဘက် ၂၄၅ မိုင်ခန့်၊ ထားဝယ်မြို့ အနောင်တောင်ဘက်ယွန်းယွန်း မိုင် ၂၅ဝ ခန့်၊ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက် ၂၁.၇ မိုင် (၃၅ ကီလိုမီတာအနက်) တွင် အင်အား ၄.၈ ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသည့် မြေငလျှင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်း USGS သတင်းအရ သိရပါသည်။
Tuesday, October 20, 2009 at 09:28:49 UTC
Tuesday, October 20, 2009 at 03:28:49 PM at epicenter
250 km (155 miles) E of Port Blair, Andaman Islands, India
390 km (245 miles) W of Mergui, Myanmar
630 km (390 miles) WSW of BANGKOK, Thailand
2610 km (1620 miles) SE of NEW DELHI, Delhi, India
horizontal +/- 24.5 km (15.2 miles); depth fixed by location program
NST= 13, Nph= 13, Dmin=866.1 km, Rmss=0.75 sec, Gp=191°,
Posted in Quakes. Tags: earthquake. LeaveaComment »
« 0600GMT TSR Alert for LUPIT
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT လမ်းကြောင်းမြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ်ရွေ့ »